3rd chikamu chezviso? yemapurisa edu nematikitivha ekunyora. | Zvazvino Zvinyorwa
Zvakanaka ngatiende kune iyo chikamu chechitatu uyu muunganidzwa we zviso iyo firimu neterevhizheni zvaisa yedu mapurisa uye matikitivha ekunyora. Haizove yekupedzisira, asi izvo zvasara zvichave zvakanyanya kunyanya kukosha. Zvekare, mune ino chinyorwa Kwete Mifananidzo kuitira kuti munhu wese akwanise kuzvichengetera zvake.
Tine materevhizheni e Mike Nyundo, de Mickey Spillaneuye Spenser, ivo Robert B Parker. Iwo achangoburwa akafanana neane ruzivo mutikitivha Fryne hove, ivo Kerry Greenwood. Dzimba dzekumba Pepe Carvalho, yemudzidzisi Montalbanuye Arturo Andrade, ivo Ignatius weMupata. Uye maviri anotonhorera, eaya eRussia Arkady renko, kubva kuNorth America Martin Cruz-Smith, uye uya weakagumbuka Danish inspector Carl Morck, ivo Jussi Adler-Olsen.
4 Pepe Carvalho saEusebio Poncela
6 Arkady Renko - William Kukuvara
7 Carl Mørck - Nikolaj Nhema Kaas
Hazvigoneke kukanganwa izvozvo saxophone Del Harlem Nocturnal naEarle Hagen, dingindira rengano kubva kumusoro weiyo terevhizheni akateedzana Makumi mashanu. Zvakare iwe haukwanise kukanganwa kuzvitutumadza uye kusagadzikana kwaakadhinda Stacy Keach pakunaka kwazvo.
Mickey Spillane akagadzira Hammer mubhuku Ini, mutongi, uye vakaitwa kutanga mafirimu maviri, muna 1952 na1982. Asi yaive mu CBS nhepfenyuro, rakaburitswa kubva 1984 kusvika 1987, kwaakawana kubudirira kwese. Hammer mupurisa wega, anosheedza pfuti yake Betsy uye anogara achitevera munyori wake, Velda. Shamwari yake yepamwoyo ndiye Kaputeni Pat Chambers, Dhipatimendi reMapurisa Anouraya New York. Rimwe remabhuku ake, Mhosva huru (1967), yaive yekuverenga kwangu kwekutanga nhema.
Isu tinoenderera mberi mu 80. Zvichida vaverengi vazhinji havazive kuti uyu mutikitivha chibereko chekufungidzira kwe Robert B Parker. Uyu munyori wenhau dzematsotsi, uyo akatanga kuve mushambadzi uye akazoshanda paBoston University, akaigadzira Chinyorwa chaGodwulf, yekutanga ye 35 iwe wakatumira nezvazvo.
Spenser Ndicho ex-boxer uye ex-cop kubva kuBoston anoshanda semupurisa wepachivande. Lives with musikana wake susan, uye kugadzirisa yavo kesi account aine shamwari yake yepamwoyo, Hawk, anogara kunze kwemutemo. Iyo ABC akashandura nyaya dzavo kuita terevhizheni Spenser, wega mutikitivha. Uye chiso chake chakamupa icho Robert Urich, mumwe wevanozivikanwa vaterevhizheni vatambi veaya makore (uye akanyangarika nekukurumidza).
Yakabudiswa izvozvi rwiyo rwechipiri yehunhu hwakagadzirwa nemunyori weAustralia Kerry Greenwood. Kubudirira kwake kwaive kwakadaro zvekuti atove mwaka mitatu mune imwe TV dzino, iri kupi akaoma uye akashinga mutikitivha kubva kumakumi maviri mutambi anozviunza kuhupenyu essie-davis. Mamiriro acho, mimhanzi uye kutandara kwenyaya dzazvo hazvigoneke uye zvinofadza vanoda mazambiringa akatevedzana.
Pepe Carvalho saEusebio Poncela
Tinouya kumatunhu aya kuzosangana imwe yeakanyanya classic (nemvumo yemumwe munhu) uye vanoyemura matikitivha emunyika. Kune iro rakakura uye rine simba kusika kwashe Manuel Vazquez Montalban akaisa kumeso kwake kwakakurumbira Eusebio Poncela mune ye1986 TVE akateedzana. Asi ivo vakakweretesa zviso zvavo Constantine Romero y Juanjo Puigcorbe, iyo yekupedzisira muFrance vhezheni.
En Kunyarara muchando (2011), iyo bhaisikopo naGerardo Herrero inoenderana nhaurwa Nguva yemadzishe asingazivikanwe, ivo Ignatius weMupata. Yaiva iyo yechipiri novel nyeredzi kaputeni Arturo Andrade, murume wemauto ane rima rakapfuura kubva munguva yapashure pehondo yeSpain. Iyi nyaya yakaiswa muSoviet Leningrad, pakati peChipiri World Cup. Ini musikana Juan Diego Botto senge runyorwa Andrade, uye angadai akachinja zvakananga kune iro rakasimba simba uye rinoratidzira chimiro cheCarmelo Gómez.
Arkady Renko - William Kukuvara
Uye isu tinodzokera ku Soviet Union nekuti ndizvozvo Arkady renko, chaizvo Russian, kushushikana uye akasarudzika muongorori izvo zvakagadzira iyo North America Martin Cruz-Smith. ari zita rekutanga yeiyo 8 anoumba (kusvika parizvino) akateedzana, Gorky Park, yakabudirira uye yakashandurwa kuita firimu mu 1983. Ndinovakurudzira vese. Uye wangu Arkady Renko haana kumeso William Kukuvara, asi Kukuvara aiziva nzira yekumupa chikamu chekutonhora icho chirevo chenyaya yacho chaida.
Carl Mørck - Nikolaj Nhema Kaas
Isu hatisiye iyo inotonhorera inotonhorera uye toguma mukati Denmark, with anogara achitsamwa uye akaoma Inspector Carl Mørck. Chisikwa chomunyori Jussi Adler-Olsen ndiye protagonist weakabudirira akateedzana Dhipatimendi Q. Zvatove mazita matanhatu rakaburitswa uye rechinomwe rinofanira kuoneka pano.
Uye vanoenda matatu mafirimu iyo inoshandura enganonyorwa nhatu dzekutanga zvakanyatsonaka: Mukadzi akakwenya madziro, Vakomana vakawira mumusungo y Mharidzo muhombodo. Zvese zvine nyeredzi mutambi weDanish Nikolaj Nhema Kass, nekushongedza iyo yakaoma Mørck. Zvakakosha kune vadikani veNordic mhosva yekuparwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Nhema nhema » 3rd chikamu chezviso? yemapurisa edu nematikitivha ekunyora.
Idzo 8 dzekurangarira edhisheni yeRAE